Torohevitra 4 ilaina amin'ny fanatsarana ny fanananao sary | Martech Zone
Alohan'ny handraisantsika toro-hevitra vitsivitsy hanatsarana ny fananana dizitaly, avelao hanandrana ny fikarohana ao amin'ny Google isika. Mamela antsika hanao fikarohana sary amin'ny iray amin'ireo sokajy mifaninana indrindra amin'ny Internet - alika kely mahafatifaty. Ahoana no ahafahan'ny Google mitana ny laharana iray amin'ny iray hafa? Ahoana no ahalalan'ny algorithm iray izay mahafatifaty?
Ity misy Peter Linsley, mpitantana ny vokatra iray ao amin'ny Google, dia tsy maintsy nilaza momba ny fikarohana sary Google:
Ny iraka ataontsika miaraka amin'i Fikarohana Google an'ny Google dia ny mandamina ny sarin'izao tontolo izao… Mifantoka betsaka amin'ny fanomezana fahafaham-po ireo mpampiasa farany izahay. Ka rehefa tonga miaraka amina fangatahana izy ireo, ary manana sary tadiaviny izy ireo, ny tanjonay dia ny hanome sary mifandraika sy ilaina ho an'io fangatahana io.
Na mitady hizara infographic indostrialy mahasoa ianao, sary mampihomehy na fananana nomerika hafa, manontania tena hoe - Ahoana no fomba hanomezako vaovao mifandraika sy ilaina amin'ny fananako nomerika?
Torohevitra 1. Mitandrema amin'ny fisafidianana ny anaran'ny rakitra amin'ny fanananao nomerika
Angamba ny torohevitra mora indrindra dia ny milaza amin'i Google momba ny fananana nomerika amin'ny alàlan'ny lahatsoratra, andian-teny manokana. Na sary, sary na horonan-tsary dia atombohy amin'ny anaran'ny fisie voavolavola hatrany. ve DSCN1618.jpg misy dikany aminao ve? Mety tsy izany. Saingy ao ambadik'io anaran'ny fisie generic io dia misy sarin'alika alika makarakara anglisy antsoina hoe Buster - ary tena mahafatifaty izy!
Raha tokony ho anaran'ny rakitra novokarina ho azy na generic dia andramo anarana tsara kokoa toa ny, mahafatifaty-Siberia-husky-puppy.jpg. Ankehitriny, efa nandrakotra teny fikarohana marobe tamin'ny anaran'ny rakitra tsotra mifandraika izahay. Anisan'izany:
Puppies Husky mahafatifaty
Husky Siberian mahafatifaty
Tsara sa? Ary amin'ny fitazonana ireo teny lakile amin'ny filename mifandraika amin'ilay sary, sy ny atiny eo amin'ny pejy izay mifandray aminy, mampitombo ny fahafahanao mahita mpitsidika anao ianao. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny teny fanalahidy ampiasainao dia mifanaraka amin'izay rehetra asongadinao amin'ny fananana nomerika. Toy ny maha-zava-dehibe ny famaritana andian-teny fehezanteny tsara hampiasaina amin'ny fanananao nomerika.
Rehefa vita tsara dia mety ho fomba sarotra io, fa mianatra ny fomba fampiasana Google's Keyword Planer afaka manampy anao hamantatra fehezanteny manao teny tsara kokoa hampiasaina.
Soso-kevitra 2: Mampiasà andian-teny lakile amin'ny fidirana an-tsoratra an-tsoratra sary
Antsoina koa hoe alt text, toerana iray hafa tadiavinao ny manatsara ny fananana dizitaly mba hanomezan'ireo milina fikarohana fikarohana lohahevitra momba ny inona ny fananana. Matetika, ny soratrao alt dia mety hitovy amin'ny anaran'ny fisieo. Ny fahasamihafana eto dia tokony hitovy kokoa amin'ny andian-teny azo vakiana.
Raha miverina amin'ilay anaran'ny fisie etsy ambony isika dia mety te hampiasa, Cute Puppies Siberian Husky, na raha te-hanazava bebe kokoa isika, Ireo zanak'alika Siberia Husky dia mahafatifaty tokoa. Ireo dia tsy mila fehezanteny feno, fa tokony hisy dikany amin'ny mason'olombelona.
Raha io voalaza io dia vao mainka mifintina kokoa ny tsara kokoa. Te hisoroka ny antsoina ianao Hala-, izay toa izao: alika alika mahafatifaty alika kely alika alika alika siberianina alika any anaty ahitra. Raha ny marina, misy ny vintana Google mety hanasazy anao amin'ireo karazana tetika famenoana.
Ireto misy ohatra amin'ny alt text:
Ratsy: alt = ""
Tsara kokoa: alt = "alika"
Tsara kokoa aza: alt = "alika kely husky siberia matory"
Tsara indrindra: alt = “alikakely husky siberia matory ambony fotsy”
Torohevitra 3: Mampiasà atiny mifandraika izay manohana ny fananana nomerika tsirairay
Mampiasa ny atiny ao amin'ny pejyo i Google mba hamantarana bebe kokoa raha mifanentana tsara na tsia ny pejin-tranonkalanao amin'ny andian-teny fikarohana manokana. Ireo andianteny teny lakile ampiasainao amin'ny fanananao nomerika dia tokony misy ihany koa amin'ny toerana toa ny lohanao, ny lohateny sy ny dika mitovy amin'ny pejy. Azonao atao ihany koa ny mieritreritra ny mampiditra lohateny ho an'ny sarinao, na angamba lohateny mamaritra.
Aza adino, raha manantena ny hanatsara ny atiny ianao dia alao antoka fa afaka mandady amin'ny tranokala HTML sy ny fananana i Google. Raha atao teny hafa, dia aza mampakatra PDF misy lahatsoratra tsy vakin'i Google.
Soso-kevitra 4: Mamorona traikefa be mpampiasa
Rehefa tonga eo io dia manandrana mamorona traikefa be mpampiasa i Google, mifanitsy amina fehezan-teny lakile karohina amin'ny valiny mifandraika amin'izany. Raha tianao hamboarina amin'ny Internet ny fanananao nomerika, dia mila mamorona traikefa tsara indrindra ho an'ny mpampiasa ianao. Hanampy amin'ny ankapobeny izany fahefana amin'ny tranokalanao, manamora ny fahitana anao. Tahaka ny olona tena izy, ny algorithm Google dia mahafantatra raha manolotra traikefa tsara tarehy ho an'ny mpampiasa ny pejinao, na zavatra mahatsiravina.
Inona no dikan'ny hoe manolotra traikefa tsara ho an'ny mpampiasa?
Sary tsara sy avo lenta - Ianaro ny fototry ny fitazonana sary maranitra sy maranitra an-tserasera. Hanome ny sisinao ny sary izany rehefa mifanila amin'ny sary hafa miseho amin'ny valin'ny karoka, izay mety hitarika tsindry bebe kokoa.
Apetraho eo akaikin'ny tampon'ny pejy ny fanananao nomerika - Ny fitazonana ny atiny ambonin'ny vala dia hampitombo ny fitoviana amin'ny fijerena azy. Fanampin'izay, ny sary dia manana fahaizana mampitombo ny fifamatorana, izay mahatonga ny mpijery hahita kokoa hamaky ilay kopia!
Lazao ny sakany sy ny haavony ho an'ny sary rehetra - Ity dia afaka manampy amin'ny fanafainganana ny famoahana pejy izay manatsara ny traikefan'ny mpampiasa. Mety mila milalao kely momba an'io ianao mba hahitanao hoe inona ny habeny toa tsara indrindra amin'ny pejin-tranonkalanao.
Aza hadisoana ny mpitsidika anao - Ampiharo ny anaran'ny rakitra ary alao antoka fa mifandraika amin'ny pejy misy azy ireo ny fananana niomerika. Raha momba ny alika ny fanananao dizitaly, dia aza ampidirina ny anaran'ny olona malaza ankehitriny mba hahazoana fivezivezena bebe kokoa.
Na dia tsy manana bilaogy alika kely aza aho hanampiana handefa an'i Buster ao amin'ny fitadiavana Google Search, antenaiko fa hanampy anao hanatsara ny fanananao nomerika ireo torohevitra ireo!
Tags: fikarohana sary googleimage optimizationmanatsara sary
22 Feb 2015 tamin'ny 8:50 maraina
Tsara iray Nate - Tena nanomboka nahita ny tombony azoko amin'ny fananana tag lava sy lava mamaritra ny sariko aho. Teknika marketing matanjaka iray hafa ny fisehoan'ny sarinao amin'ny fikarohana sary. Azo inoana fa afaka manindry ny rohy sary ny mpampiasa ary mitsidika ny tranokalanao tokoa.
Misy torolàlana momba ny singa "famaritana" sy "lohateny" an'ny sary? (amin'ny WordPress na izany aza raha toa ka efa nampiasanao azy ireo)
23 Mey 2015 tamin'ny 2:29 hariva
Misaotra anao, Nate, tamin'ny namelabelatra ireo torohevitra mahasoa ireo 😀
23 Mey 2015 tamin'ny 9:08 hariva
Salama Ahmad! Raha manaraka ireo torohevitra efatra voalaza etsy ambony ianao, dia havaozina tsara ny sarinao. Raha mila mahafantatra ny momba ny sary ny olona iray, dia holazain'ny Alt Image Tag izy ireo, ary i Google dia mijery ny Alt Image Tag sy ny anaran'ny sary momba ny sanda SEO. Izaho manokana tsy mampiasa ny famaritana na ny lohateny. Raha hipetraka eo amin'ireo saha ireo ianao dia tiako ny hametrahana azy ireo ho hitan'ny mason'olombelona. Misaotra namaky!